Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa | Teta! Mee-Jun 2014
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
N’afọ 2011, ala ọma jijiji mere na Lọka dị na Spen. Mmadụ itoolu nwụrụ, ebe ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ́. Ndị ọkachamara kwuru na ọ bụ ndị mmadụ kpatara ala ọma jijiji ahụ. Ha chọpụtara na ebe ala ọma jijiji ahụ mere dị nso n’ebe a na-egwu mmiri a na-agba n’ubi kemgbe ọtụtụ afọ.
Ndị si mba dị iche iche, ma Chaịna ma Jamanị ma Amerịka, na-adị na-aga n’obodo ndị ọzọ ka ha gaa legharịa anya. Ego ha na-akwụ maka ụgbọelu na ihe ndị ha na-azụ abụghị obere ego. Ma, ngalaba òtù mba ụwa na-ahụ maka ndị na-aga mba ọzọ kwuru na ego ndị Chaịna mefuru iji gaa mba ọzọ n’afọ 2012 karịrị ego ndị Jamanị na ndị Amerịka mefuru.
Otu akwụkwọ a na-ede na Briten kwuru na e nwere nchọpụta a malitere ime na Japan kemgbe iri afọ abụọ na atọ gbasara ndị na-ese sịga. A chọpụtara na n’ime ndị a mụrụ n’agbata afọ 1920 na afọ 1945, ọ bụrụ na nwaanyị malitere ise sịga tupu ya eruo afọ iri abụọ anwụọ, nwaanyị ọzọ bụ́ ọgbọ ya na-anaghị ese sịga ga-anọ afọ iri ọzọ tupu ya anwụọ. Ọ bụrụkwanụ nwoke, onye na-anaghị ese sịga ga-anọkwu afọ asatọ ọzọ tupu ya anwụọ.
A chọpụtara na ụmụ anụmanụ na azụ̀ na-anwụ ma ha loo wọtapruf. N’ihi ya, ndị ọchịchị machiri ma ịtụbata wọtapruf ma imepụta ya ma iji ya eme ihe ọ bụla n’obodo a. Ha na-agwa ndị mmadụ ka ha jiri ihe ndị nwere ike ire n’ala na-ekechi ihe.
Kwa afọ, ego ndị ụlọ ọrụ ịnshọransị na-emefu ma e nwee ebe ihe dị ka oké ifufe mebiri ihe na-eru ihe dị ka puku ijeri naịra asaa. N’agbanyeghị na e tinyere ego n’ego ahụ a dị ama ama ihe adaa oké ọnụ, kemgbe afọ 1980, ego ahụ na-arị elu okpukpu abụọ n’afọ iri ọ bụla.
Ihe Ndị Na-eme n’Ụwa—Mee-Jun 2014